Urur siyaasadeedkii u horeeyay ee lagu aasaaso madal balaadhan oo lagu qabtay Hargeysa | Somaliland.Org
Urur siyaasadeedkii u horeeyay ee lagu aasaaso madal balaadhan oo lagu qabtay Hargeysa
September 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Xaflad lagu aasaasayay urur siyaasadeed cusub oo la magac baxay dalsan ayaa maanta lagu qabtay Huteelka Xaraf ee magaalada Hargeysa, kaasi oo ay ka soo qeyb galeen 236 ergay oo ka kala yimid gobolada dalka.
Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka Dalsan Eng. Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil yare) oo ka hadlay xafladan waxa uu yidhi “Waxaan aad iyo aad ugu mahad naqayaa aasaaseyaasha ka soo qeyb galay shirweynaha aasaaska ururka dalsan, waxaan ergada uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad uga soo qeyb gasheen ee aad nooga ajiibteen casuumadan oo aad nala aasaasteen urur siyaasadeedkan. Waxaanay ergadani ka timid gobolada Somaliland ururkani waa ururka nabadda iyo horumarinta ee dalsan. Dal wanaagsani waa kii nabad haysta.Somaliland waxay leedahay xuduud caalami ah oo rasmi ah.”
Ismaaciil Aadan Cismaan waxa uu si faahfaahsan uga hadlay marxaladihii kala duwanaa ee Somaliland soo martay, waxaanu sheegay inaanay qaranimada Somaliland gorgortan lahayn oo ay ku timid halgan qadhaadh.
“Waxaan leeyahay dawlada ha laga daayo in la yidhaahdo waxay na geynayaan Soomaaliya, madaxdeenu kumay dhawaaqin inay Soomaaliya inagu wadaan laakiin aan ka dayno hadalka Madaxweyne Siilaanyo horena wuu ugu dhawaaqay in badan in Somaliland tahay dal madax banaan imikana wuu sheegay waxaan leeyahay aynu aamino waynu dhaarinay oo waynu dooranaye’e. Madaxweyneyaashii hore oo dhan iyagana waxa la lahaa waxay inageynayaan Soomaaliya, Daahir Rayaaleba waa tii lagu lahaa inamanuu geynin ee wakhtigiisii waa kii markii uu dhamaystay iska tagay. Cidina inama kaxayn karto. Haddii aan anigu caloosha ku haysto ILAAHAY inagama dhigee meel ma geyn karo haddii aanay dadkani ina ogolayn. Waxaan leeyahay aynu la shaqayno kolba xukuumadii inoo dhalata.”
“Waxaan leeyahay xisbiyada qaar baa lahaa haddii la furo wax baa dhacaya, iyadoo la furayna wali way leeyihiin, waxaan leeyahay wax dhacayaa ma jiraan ururadan samaysmayaana waa ururo nabadeed,”ayuu yidhi Ismaaciil Yare.
Guddoomiyuhu waxa uu tafaasiil ka bixiyay waxyaabaha ururkoodu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira dalka waxaanu yidhi “Ururkani waxa uu kaga duwan yahay ururadii hore 32 qof ayaa odhan jiray waanu aasaasnay. Maanta waxaynu shirweynahan iskugu nimid 236 qof oo ka kala yimid gobolada dalka oo dhan ayaynu ku aasaasnay ururkan dalsan. Waxaanu noqon doonaa xisbi u dhashay ummadda reer Somaliland oo dhan waa xisbi u dhashay dhalinyarada, Haweenka iyo waayeelkaba. Waa urur u dhashay inuu ka midho dhaliyo dalkeena qaniga ah waxa uu u baahan yahay oo kaliya in laga shaqaysiiyo dadka aqoonta leh ee jooga gudaha iyo dibadaba.”
Xildhibaan C/Qaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, oo ka tirsan Mudaneyaasha Golaha Wakiilada oo ka hadlay furitaankii shirweynaha ururka dalsan oo Lagu soo marti qaaday waxa uu yidhi “Waxaan ku faraxsan nahay inaan ka soo qeyb galo wanqasha shirweynaha ururka siyaasiga ah ee cusub ee dalsan, dagaal badan ayaanu anagu ka galay in ururada siyaasiga ah la furo ugu dambayn waa lagu guulaystay in la ogolaado. Waxaan ku faraxsan nahay in hawshii aan qeyb ku lahaa in maanta halkan loo fadhiyo. ILAAHAY waxaan uga baryayaa inuu ururkan ka dhigo mid ka mid ah sadexda urur ee ku soo baxa xisbinimada.”
“Dadweynahana waxa looga baahan inay is garab taagaan,waxaan leeyahay hawshu waa bilowgii iyo unugii u horeeyay ee waa inaad la shaqaysaan oo is daba taagtaan. Waxaan leeyahay qaban qaabiyeyaashii ururka yaan hawsha oo dhan lagu helayn. Waxaan ergada iyo dadweynaha u soo jeedinayaa inay tallo, xoolo iyo wakhtiba ay geliyaan ururka dalsan,”ayuu yidhi Xildhibaan C/Qaadir Jirde.
Md. C/Qaadir Jirde waxa sheegay inuu hore uga soo qeyb galay wanqashii KULMIYE, UCID iyo urur siyaasadeedkii ASAD.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Jawaabtii Ugu adkayd Abidkii Ka bixiyay eedo mucaaridku u jeediyeenNext PostXubnihii UCID ee Gobolka Sool Oo ku dhawaaqay Inay ka baxeen Xisbiga	Blog